IMovistar + Lite: konke odinga ukukwazi | Izindaba zamagajethi
U-Ignacio Sala | | Ama-movie nochungechunge, Ukusakaza
Ithelevishini, njengoba besiyazi ngokwesiko, iphoqeleke ukuthi ishintshe ukuze ivumelane nezintandokazi, futhi ngokwengxenye izidingo, zabasebenzisi abadla okuqukethwe. Impela endaweni yethu esiseduzane, sihlangana nabantu unenkontileka yesevisi yokusakaza ividiyo ukwazi ukudla okufunayo, lapho ufuna nalapho ufuna khona.
Kuya ngokuya kuvama ukubona ukuthi kuthelevishini yendabuko basinikeza kanjani ama-movie noma uchungechunge olungenazo izikhangiso, futhi uma bekwenza, basazisa ngobude besikhathi abazoba naso, yize kungavamile ukwenza njalo. Ubulula obuhlinzekwa yinsizakalo yevidiyo yokusakaza ngeke itholakale kuthelevishini. IMovistar + Lite ijoyina okunikezwayo okuvele kukhona kusuka kuNetflix, HBO naku-Amazon Prime Video. Lapha sikukhombisa konke odinga ukukwazi ngeMovistar + Lite.
1 Yini iMovistar + Lite
2 Yini uMovistar + Lite anginikeza yona
3 Ngingalibuka ibhola kwiMovistar + Lite?
4 Ingabe ifaka i-Netflix noma i-HBO?
5 Ngabe iMovistar + Lite ibala malini?
6 Itholakala kuphi iMovistar + Lite
7 Lapho ungabona khona iMovistar + Lite
8 Ngingalanda okuqukethwe eMovistar + Lite
9 Yiliphi ikhwalithi elinikezwa yiMovistar + Lite
10 IMovistar + Lite ikufanele
Yini iMovistar + Lite
IMovistar + insizakalo yethelevishini ye-inthanethi uMovistar ayinikeza wonke amakhasimende ayo anenkontileka yephakethe le-inthanethi kanye nocingo, iphasela elinyusa intengo yesevisi nokuthi kwenza ukunikezwa kwalo opharetha kube okunye okubiza kakhulu emakethe.
Ukuzama ukufinyelela inani elikhulu labasebenzisi, uMovistar wethule IMovistar + Lite, inguqulo encishisiwe yeMovistar + (njengoba igama likhombisa) kepha ngokungafani nalokhu, iyatholakala kunoma yimuphi umsebenzisi ongelona ikhasimende leMovistar.
Yini uMovistar + Lite anginikeza yona
Okuqukethwe kokuqala esinakho eMovistar + Kuyafana lokho esikuthola eMovistar + futhi phakathi kwawo sithola iziteshi # 0, iMovistar Series, Seriesmanía, Fox, TNT, Comedy Central, AMC nesiteshi sezemidlalo #Asambe, lapho singathokozela khona imicimbi yezemidlalo enikezwa yile nkundla, kepha lapho kungatholakali khona iligi noma imidlalo yeChampions League.
Ngaphezu kwalezi ziteshi, sinakho a ikhathalogi equkethe uchungechunge lwama-300, izinhlelo ezingama-60 namafilimu angama-270 ngokufunwa, lapho sithola khona umkhiqizo wokuqala ofanayo otholakala kuMovistar + njengoLa Peste, El Embarcadero, La Vida Perfecta ...
Ngingalibuka ibhola kwiMovistar + Lite?
Cha izivumelwano zeligi yebhola likanobhutshuzwayo laseSpain kanye neChampions banezindleko eziphakeme kakhulu ngokuqondene neMovistar ukuyinikeza ngemali engama-euro angama-8 ngenyanga. Imincintiswano ebukhoma eyenziwe nguMovistar + Lite yile:
Indebe yeSuper Super
Ithenisi: IWimbledon, iMasters 1000 ne-ATP 500
I-English ne-German League
Izizwe ezi-6, iRugby Championship kanye no-7 Series kuRugby
IDiamond League Athletics
Ngaphezu kwezinhlelo zezemidlalo ezitholakala nge- #Asambe njengo-Report Robinson, The Day After, NBA Generation ...
Ingabe ifaka i-Netflix noma i-HBO?
Ngaphandle kokuthi amapulatifomu womabili afinyelele ezivumelwaneni ezithile, okuqukethwe okutholakala kusuka kuNetflix kuzoqhubeka nokutholakala kuphela kwiNetflix, njengalokho kweHBO. Kodwa-ke, eMovistar + Lite siya thola okunye okuqukethwe kwe-HBO njengochungechunge lweMidlalo yezihlalo zobukhosi, kanye nezihloko ezinjengeMad Men, i-Orange yiNew Black, Igazi Langempela ...
Ngabe iMovistar + Lite ibala malini?
IMovistar + Lite ibiza ama-euro angama-8 ngenyanga Futhi ifaka nolayini wocingo, esingawenza usebenze noma cha, ngezingcingo zamahhala ezingenamkhawulo ngezindleko zokusungula izingcingo zamasenti angama-40 nezindleko zokuthumela i-SMS yamasenti angama-30.
Ungazikhipha kanjani ohlwini lwe-HBO
Njenganoma iyiphi enye insiza yokusakaza ividiyo, singazikhipha ohlwini nganoma yisiphi isikhathi, ngoba asikho isikhathi saphakade, njengokungathi singathola kunoma iyiphi iphakethe leMovistar lapho kufakwa khona iMovistar +. IMovistar + Lite isivumela ukuthi sihlole insizakalo inyanga engu-1 mahhala ngokuphelele, ukubona ukuthi okuqukethwe okusinikezayo kuhambisana nezidingo zethu noma cha.
Itholakala kuphi iMovistar + Lite
Okwamanje, ngenkathi iMovistar ixoxa ngamalungelo okusakaza okuqukethwe kwamanye amazwe, konke Okuqukethwe kweMovistar + Lite kuyatholakala eSpain. Uma uhamba eYurophu, uzokwazi ukufinyelela kukho konke okuqukethwe okutholakala kule sevisi ngaphandle kwenkinga, yize ungeke ukwazi ukukuqasha kusuka kwelinye izwe.
Lapho ungabona khona iMovistar + Lite
Njengesevisi enhle yokusakaza ividiyo, iMovistar isinikeza izinketho ezahlukahlukene zokusebenzisa okuqukethwe kusikhulumi sayo esisha, empeleni uhlelo lokusebenza olufanayo njengamanje olusetshenziswa yibo bonke abasebenzisi beMovistar +, ngakho-ke awudingi i-decoder noma enye into enjalo.
Uhlelo lokusebenza lwe-Movistar + luyatholakala nge:
Ama-Smart TV avela ku-Samsung ne-LG
Ama-TV aphethwe yi-Android TV (Sony, Philips, Panasonic)
Amadivayisi we-Android TV (iNvidia Shield, iXiaomi Mi Box…)
Amadivayisi we-Android, i-iPhone, i-iPad ne-Amazon Fire TV Stick
Uhlelo lokusebenza lwe-Movistar + alutholakali nge:
I-Apple TV +
Ngeshwa okwamanje futhi kubonakala sengathi akuyona inketho yesikhathi esizayo, abasebenzisi bezinduduzo ezifana ne-PlayStation 4 ngeke bakwazi ukusebenzisa ama-consoles abo ukusebenzisa okuqukethwe kwale nkundla. Abasebenzisi beMac nabo balahliwe ngokusebenzisa noma isiphi isiphequluli ngaphandle kweSafari ukuze bakwazi ukufinyelela kule nsizakalo kanye nalabo abaneChromecast, okungenani ekuqaleni kodwa bamemezele le nketho cishe unyaka owedlule futhi okwamanje ayikatholakali. Uma singenayo idivayisi esiseduze, singakhetha ukusebenzisa i- iwebhusayithi ukufinyelela konke okuqukethwe okunikezwe thina.
Umthuthukisi: IMovistar Spain
Ngingalanda okuqukethwe eMovistar + Lite
Njenganoma iyiphi enye insizakalo yokuzihlonipha ye-VOD efuna ukunikela ngezinsizakalo kumakhasimende ayo, iMovistar + Lite Isivumela ukuthi silande okuqukethwe ukuze sikudle ngaphandle kokuxhumeka kwe-inthanethi kuwo womabili amadivayisi weselula we-iOS ne-Android njengakumathebulethi, yize singakwenza kuphela ochungechungeni nakuma-movie asikhombisa leyo ndlela.
Ungazivimbela kanjani izikhangiso zeNetflix phakathi kwezahluko
Yiliphi ikhwalithi elinikezwa yiMovistar + Lite
Konke okuqukethwe okutholakala kwipulatifomu ye-Movistar yokusakaza ividiyo kungukuthi itholakala ngo-720p, Ukulungiswa okulungile uma sikuqhathanisa nekhwalithi enikezwa umncintiswano oqonde kakhulu njengeNetflix (4k) ne-HBO (1080p). Kepha uma sisebenzisa amadivayisi eselula, izinto ziba zimbi kakhulu, ngoba isinqumo sincishisiwe saba ngu-576p.
IMovistar + Lite ikufanele
Uma siqala ukuhlola okuqukethwe esinakho njengamanje, okunganikezwa yibhola lezinyawo lokuqala noma iChampions League, kanye nentengo nekhwalithi yesithombe sayo, Le nsizakalo entsha yeMovistar ayifanele ngempela.
Uma ufuna ukufinyelela kufayela le- ikhathalogi elingapheli lochungechunge INetflix iyindlela engcono kakhulu (ama-euro angu-7,99 abiza ukufinyelela okungabizi kakhulu). Uma ufuna uchungechunge lwekhwalithi, i-HBO iyindlela engcono kunazo zonke ngenkathi i-Amazon Prime Video, njengoba ifakiwe kokubhalisile kweNdunankulu, imahhala ngokuphelele futhi okuqukethwe kwayo kuya ngokuya kuphelele futhi kusezingeni eliphakeme.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ikhaya » Ama-movie nochungechunge » IMovistar + Lite: konke odinga ukukwazi
/ Ungazenza kanjani izinkomba ku-Word